केवल एक तरीका - विश्वव्यापी चर्च भगवान स्विट्जरल्याण्ड
लेख > भविष्य > केवल एक तरिका?
मानिसहरूले कहिलेकाहिँ मुक्ति येशू ख्रीष्टमार्फत मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने इसाई शिक्षाको अपमान गर्दछन्। हाम्रो बहुलतावादी समाजमा सहिष्णुताको आशा गरिन्छ, वास्तवमा माग गरिएको छ, र धार्मिक स्वतन्त्रताको अवधारणा (जसले सबै धर्महरूलाई अनुमति दिन्छ) कहिलेकाँहि गलत अर्थ लगाइन्छ जसको मतलब सबै धर्महरू एकै समान सत्य छन्। सबै सडकहरूले एकै परमेश्वरतर्फ डो lead्याउँछन्, कोही भन्छन्, मानौं कि तिनीहरू ती सबैमा फर्केका छन् र आफ्नो गन्तव्यबाट फर्केका छन्। तिनीहरू केवल एकतर्फी विश्वास गर्ने चेकर व्यक्तिहरू प्रति कुनै सहिष्णुता देखाउँदैनन्, र तिनीहरूले उदाहरणका लागि प्रचारप्रसारलाई अस्वीकार गर्दछन्, जुन अन्य व्यक्तिको विश्वास परिवर्तन गर्ने अपमानजनक प्रयास हो। तर तिनीहरू आफैंले एक तरीकाले विश्वास गर्ने व्यक्तिको विश्वास परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। त्यसोभए यो के हो - मसीही सुसमाचारको शिक्षाले वास्तवमै सिकाउँदछ कि मुक्ति पाउने एकमात्र तरीका येशू हुनुहुन्छ?
अधिकांश धर्महरू विशेष छन्। अर्थोडक्स यहूदीहरू तिनीहरूसँग साँचो मार्ग छ भनी दाबी गर्छन्। मुस्लिमहरू परमेश्वरबाट सब भन्दा राम्रो अभिव्यक्ति भएको दाबी गर्छन्। हिन्दूहरू विश्वास गर्छन् कि तिनीहरू सहि छन्, र बौद्धहरू उनीहरूले गरिरहेका कुरामा विश्वास गर्छन् जसले हामीलाई आश्चर्यचकित गर्नु हुँदैन - किनभने तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि यो सहि छ। आधुनिक बहुलवादीहरू पनि विश्वास गर्छन् कि बहुवचनवाद अन्य विचारहरू भन्दा बढी सहि छ।
सबै सडकहरू एकै परमेश्वरमा पुग्न सक्दैनन्। बिभिन्न धर्मले बिभिन्न देवताहरुको वर्णन गर्दछ। हिन्दूका धेरै देवताहरू छन् र मुक्ति कतै फर्किएन भनेर वर्णन गर्दछन् - निश्चित रूपमा मुस्लिम एकेश्वरवाद र स्वर्गीय इनाममा जोडको अलावा अर्को गन्तव्य। न मुस्लिम र न हिन्दू उनीहरूको मार्गले अन्तत: समान लक्ष्यमा पुग्ने कुरामा सहमत हुनेछन्। उनीहरूले परिवर्तनको सट्टा लडाई गर्नेछन् र पश्चिमी बहुलवादहरूलाई अवहेलना र अज्ञानी भनेर खारेज गरिनेछ र बहुलवादले अपमान गर्न नचाहने ती विश्वासहरूको उत्थान हुनेछ। हामी विश्वास गर्छौं कि इसाई सुसमाचार सही छ जबकि मानिसहरूलाई विश्वास नगर्न अनुमति दिईन्छ। हाम्रो बुझाइमा, विश्वासको लागि विश्वास गर्नु आवश्यक छ मानिसहरूलाई विश्वास नगर्ने स्वतन्त्रता चाहिन्छ। तर जब हामी मानिसहरूलाई उनीहरूको निर्णय पछि विश्वास गर्ने अधिकार दिन्छौं, यसको मतलब यो होइन कि हामी विश्वास गर्छौं कि सबै विश्वासहरू सत्य छन्। अरू मानिसहरूलाई ठिक देखिएमा विश्वास गर्न अनुमति दिनुको मतलब यो होइन कि हामीले मुक्ति पाउने एक मात्र उपाय येशू हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न छाड्नु भनेको होइन।
अधिकांश धर्महरूले मुक्तिको लागि मार्गको रूपमा कामका केही रूपहरू सिकाउँदछन् - कि तपाईं पर्याप्त प्रार्थना गर्नुहुन्छ, सही कुरा गर्नुहोस्, यो आशामा कि यो पर्याप्त हुनेछ। तिनीहरूले सिकाउँछन् कि व्यक्तिहरू पर्याप्त काम गर्न सक्छन् यदि तिनीहरूले कडा परिश्रम गरे। तर इसाईमतले सिकाउँछ कि हामी सबैलाई अनुग्रह चाहिन्छ किनकि हामी जस्तोसुकै प्रयास गरे पनि वा हामी जतिसुकै प्रयास गरे पनि हामी राम्रो हुन सक्दैनौं। यो असम्भव छ कि एकै समयमा दुबै विचारहरू सत्य छन्। हामी यो रुचाउँदछौं वा गर्दैनौं, अनुग्रहको शिक्षाले भन्छ कि अरू कुनै मार्ग मुक्तितिर डोर्याउँदैन।
येशूको बारेमा सुन्न नसक्ने मरेका मानिस नि? हजारौं किलोमिटर टाढाको मुलुकमा येशूको समयभन्दा पहिले जन्मेका मानिसहरूबारे चाहिं के भन्न सकिन्छ नि? तपाइँसँग केहि आशा छ?
यदि मानिसहरूले इमान्दारीपूर्वक कामहरू, ध्यान, flagellation, आत्म बलिदान, वा कुनै अन्य मानव माध्यमहरू मार्फत मुक्ति प्राप्त गर्न कोसिस गरेका छन्, तिनीहरूले आफ्नो कामहरू मार्फत तिनीहरू परमेश्वरमा कुनै योग्यता छैन भनेर पाउनुहुनेछ। मुक्ति अनुग्रहबाट र अनुग्रहबाट मात्र आउँदछ। इसाई सुसमाचारले सिकाउँछ कि कसैले पनि मुक्ति कमाउन सक्दैन, यद्यपि यो सबैको लागि पहुँच योग्य छ। कुनै व्यक्ति जुनसुकै धार्मिक मार्गमा लागेको भए पनि ख्रीष्टले उसलाई त्यसबाट बचाउन र उसलाई आफ्नो बाटोमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। उहाँ परमेश्वरको एक मात्र पुत्र हुनुहुन्छ जसले एक मात्र मेलमिलाप बलिदानको प्रस्ताव गर्नुभयो जुन सबैलाई चाहिन्छ। यो परमेश्वरको अनुग्रह र मुक्तिको अनुपम माध्यम हो। येशू आफैले सत्यको रूपमा सिकाउनुभएको थियो। येशू एकै समयमा अनन्य र समावेशी हुनुहुन्छ - साँघुरो तरीका र सम्पूर्ण संसारको मुक्तिदाता - मुक्तिको एक मात्र तरीका, तर सबैको लागि पहुँचयोग्य।
हामी सबैलाई चाहिने उही नै येशू ख्रीष्टमा देख्ने परमेश्वरको अनुग्रह हो, र शुभ समाचार यो हो कि यो सबै मानिसका लागि स्वतन्त्र रूपमा उपलब्ध छ। यो राम्रो समाचार हो, र यो साझेदारी गर्न लायक हो - र सोच्नको लागि यो केहि हो।